5 jeer oo la cadeeyay si aad ugu dirto emaylladaada otomaatiga ah | Martech Zone
Waxaan nahay taageerayaal badan oo emayllada otomaatiga ah. Shirkaduhu badanaa ma laha ilo ay ku taabtaan rajo kasta ama macaamiil si joogta ah, sidaas darteed emayllada otomaatigga ah waxay yeelan karaan saameyn xoog leh kartidaada wada xiriirka iyo kobcinta hogaamintaada iyo macaamiishaada. Emma waxay qabatay shaqo cajiib ah oo si wada jir ah isugu soo uruurineysa sawirkan sare 5 emayllada otomaatiga ah ee ugu waxtarka badan si loo diro.
Haddii aad ku jirto ciyaarta suuqgeynta, waxaad horeyba u ogayd in otomatiggu fure u yahay gaaritaanka dhagaystayaasha saxda ah waqtiga saxda ah. Laakiin miyaad ogtahay emayllada otomaatigga ah ee kuu heli doona bangiga ugu weyn ee suuqgeynta suuqgeynta?
Goorma iyo Sababta loo dirayo E-mayllada iswada
E-mayl soo dhawow ay 86% ka waxtar badan yihiin joornaalada emaylka caadiga ah.
E-mayllada Korinta waxay soosaaraan 47% iibsasho ka badan kuwa aan korin.
Emails Mahadsanid abuuraan 13 jeer dakhli ka badan inta waraaqaha xayeysiinta ah.
Emails-ka dhalashada kor u qaad qiimaha sicirka 60% marka loo eego waraaqaha kale ee isla soojeedinta ah.
Dib-u-hawlgelinta E-mayllada wad wadashaqeyn dheeri ah, 45% dadka qaata waxay aqriyaan fariimaha xiga.
In kasta oo dad badani rumaysan yihiin in isgaadhsiin badan oo emayl ahi ay si xun u saamayn karaan dadaalkaaga suuq-geynta, fariimaha otomaatiga ah ee sidan oo kale caadi ahaan looma dejin. Taasi waxay yareyn kartaa fursadahaaga inaad ku dhex gasho arrimaha soo-gaadhista. Maaddaama ay yihiin kuwo shakhsi ahaaneed iyo waqti ku habboon, waxay kordhin karaan hawlgelinta si weyn. Taasi waxay ka dhigan tahay furitaan badan, qiimeyn gujin-fiican iyo beddelaad.
Tags: emayllada iswadaqalabayntaemaylka dhalashadaheerka beddelkaotomatiga emaylkaheerka beddelka emaylkaemaylka furanmyemmakobcinta emaylkaheerka furanqiimaha furanemaylka dib u hawlgelintawaad ku mahadsantahay emaylladasoo dhawoow emaylka
Xaalada Ganacsiga Bulshada ee Bulshada
Nov 26, 2015 at 5: 47 AM
Waad ku mahadsan tahay talooyinka! Waxaan maanka ku hayn doonaa marka xigta ee aan isticmaalayo GetResponse.